6 matipi ekubudirira Data Mining - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
6 matipi ekubudirira kweData Mining
Heano matipi mashoma ekuti urambe uchifunga kuti ushandise zvakakwana zvinobudirira date kuchera nzira:
1. Sarudza mapurojekiti ako nokungwarira
Edza kutarisa pamapurojekiti anonyatsoenderana nezvakakosha bhizimisi verticals sekutsvaga mikana yekutengesa-yakasiyana, kuvimbika kwemutengi, kana kuona kubiridzira. Izvi zvinobatsira mukutamba zvakachengeteka kusvika pakubudirira kweprojekti kunoenda.
2. Unganidza yakawanda data sezvinobvira kubva kune akawanda masosi
Paanenge achishandisa date kuchera, imwe inoda kutevedzera maitiro evatengi maitiro ayo anogadzira akakosha seti yedhata kune vane hunyanzvi pamwe nekukanganisa vatengi vanokurudzirwa.
3. Iva nechokwadi chekuchenesa sampuli zano
Kunyangwe uine simba rakawanda analytics chikuva, chinogona kuenzanisira huwandu hwevanhu, iwe unofanirwa kuyedza kutarisa kune madiki, akareruka maseti e data. Kutarisa pane yakajeka, pfupi sampling zano ndiyo kiyi yekubudirira date kuchera.
4. Dzidzira 'kurasa modelling'
Nhanho yekutanga yeiyo modelling maitiro ndeyekutarisa akanakisa ekufungidzira kubva kune hombe seti yezvakasiyana zvaunogona kuwana kwauri. Kukanda modelling kunoreva kukanda mune rese ruzivo, kuyedza akasiyana mamodheru uyezve kuchera pasi pane yakasarudzika maitiro. Kutevedzera maitiro akadaro muchikamu chekutanga cheprojekti yako, kunopa kusvetuka chaiko mukugadzirwa gare gare.
5. Muenzaniso wekubata unofanirwa kugara uchishandiswa
Muenzaniso wekubata unoshandiswa seyeyeuchidzo sampuro yekutonga kana iyo modhi yauri kushanda pairi inokwanisa kufembera ramangwana zvibodzwa. Izvi zvinoenderana nemuenzaniso wekutarisa wakabatiswa kubva pakufungidzira kuti ubudise muenzaniso wekufungidzira. Kugadzirira muyenzaniso wekupa zvipo kunoona kuti modhi yekungonongedza-yekutengesa haina kuvakwa iyo yakavakirwa pane yakatsanangurwa seti yedata chete. Nekudaro, inopa iyo yakasimba nzira yekuvaka modhi.
6. Zorodza mamodheru kazhinji
Iyo yekufananidzira modhi yawakauya nayo haizogara ichienderana neyako chaiyo data data. Mienzaniso inoda kupihwa mukati nedata nyowani mwedzi wega wega, vhiki, zuva nezuva, kana kunyangwe paawa. Naizvozvo, iyo iteration uye yekukora frequency yakakosha kwazvo kuti uwane iko kwekufananidzira kwemuenzaniso wako.